PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-11-18 - AKE SIKWAZI
Isolezwe ngeSonto - 2018-11-18 - ABANTU -
Ngesikhathi esasebenza emafemini, uthe ubengayekile ukuba kwezobuciko kodwa engagxilile kakhulu.
“Ngigcine ngiyekile ukusebenzela amafemu ngangena kwezobuciko ngo-1974. Ngingene ngaphansi kukaGibson Kente owayehlonishwa emidlalweni yeshashalazi. SengikuKente ngilingise emidlalweni eyahlukene okukhona kuyona iMama and Lord, How Long, I Believe, Can You Take It neminye.”
Ngo-1978, uthe yena noPercy Mtwa ababengaphansi kukaKente bathatha isinqumo sokuzimela basungula iWoza Albert.
Lo mdlalo uthe wabadonsela amanzi ngomsele kuhulumeni wobandlululo owawungahambisani nabakusho kuwona. Uthe babengena bephuma ejele ngenxa yawo.
Into athe yayibuye ibadonsele amanzi ngomsele ukuthi lo mdlalo unabalingisi ababili okuyinto eyayingajwayelekile kudala.
Uthe ukuhlangana kwabo bobabili kwakwenza sengathi kunetulo abaphezu kwalo kuhulumeni wobandlulo, bagcine sebeboshwa.
Uthe noma kwakungewona umdlalo wokuqala onabalingisi ababili iWoza Albert, wawukhona okaJohn Kani noWinston Ntshona kodwa awudumanga eNingizimu Afrika ngenxa yokuthi wawukhonjiswa emazweni angaphandle.
Ukuhlala beboshelwa lo mdlalo, uthe kwabenza baduma kakhulu ngoba bagcina sebejikeleza umhlaba wonke bekhombisa ngawo, ngoba kwakunamazwe ayefuna ukubona ukuthi yini le eyenza baboshwe ngawo.
Ngemuva kwawo uthe zonke izinto bese zizenzekela ngoba ugcine esesungula omunye weshashalazi i- Asinamali osuphendulwe ifilimu manje. Nayo yaduma umhlaba wonke yaze yakhonjiswa eBroadway okungayi noma imuphi umdlalo khona.
Ngenxa yokuba namava emidlalweni yeshashalazi, uthe ngo-1986 usungule iSarafina nayo edume umhlaba wonke futhi ejikeleze wonke amazwe akhona emhlabeni.
Omunye umdlalo awusungule ngo-2013, iThe Zulu okhuluma ngomlando wamaZulu.
Njengoba ezoqala ukukhombisa ngeWoza Albert ePlayhouse ngenyanga ezayo, uNgema, uthe kukhona omunye umdlalo weshashalazi iMandela Musical (Through The Eyes Of an Artist).
Lo mdlalo uthe uzoqala ukukhonjiswa ePlayhouse ngoMashi wonyaka ozayo.
Uthe ukhuluma ngempilo kaMandela. Umsebenzi wakhe kwezobuciko usumenze wahlonishwa ngeziqu zobudokotela.
Kulo nyaka uphinde wahlonishwa ngeLifetime Achievement Award kumaSouth African Music Awards (Sama).
Ngaphandle kwemidlalo yeshashalazi, uNgema uphinde aziwe njengomculi.
Ezinye zezingoma zakhe aduma ngazo kukhona ethi Woza
Stimela saseZola, Magic
At 4A.M nethi
Ethi AmaNdiya yamdonsela amanzi ngomsele ngo-2002, kwagcina kuthiwe ayivalwe ukudlalwa emphakathini ngoba igqugquzela ukucwasa ngokobuhlanga.
Ngo-2013 uhlonishwe ngeziqu zobudokotela i-University of Zululand.
Useke waphatha isikhungo sezobuciko iKZN Music House.
Kulesi sikhungo wake wasingatha umcimbi owaba sematheni obizwa ngeJola, owawuvumela abantu ukuthi bafike nezithandwa zabo bezojola khona.
Ngaphandle kwalo mcimbi wake waba sematheni ngokuvela kwezindaba zokuthi uzoshada nabesifazane abahlanu, kubona okwakukhona noMroza Buthelezi woKhozi FM.
Kafushane ngoDkt Ngema
UMBONGENI Ngema ebonga izihlwele emva kokubukiswa kweSarafina eState Theatre, ePitoli Isithombe: ESIGCINIWE
UMBONGENI Ngema nosomabhizinisi oyinjinga waseKZN uMnuz Vivian Reddy Isithombe: ESIGCINIWE